साफ यु–१६ को बाजी कस्ले मार्ला..? निर्णायक खेल आज - E Net Nepal
Home Sports साफ यु–१६ को बाजी कस्ले मार्ला..? निर्णायक खेल आज
साफ यु–१६ को बाजी कस्ले मार्ला..? निर्णायक खेल आज
hamro yatra 12:07 PM Sports,
१५ साउन । काठमाडौंमा जारी साफ् अण्डर सिक्सटिन फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन् ।
मंगलबार दुई देशबीचको निर्णायक खेल दशरथ रंगशालमा हुदैछ । आइतबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानलाई टाई ब्रेकरमा ४–३ ले हराउँदै भारत फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । खेलको निर्धारित ९० मिनेट गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि नतिजा टाई–बे्रकरबाट आएको हो ।
प्रतियोगिताको समुह बी मा रहेको भारत समुह विजेता बन्दै सेमीफाईनलमा पुगेको थियो भने समुह ए मा रहेको अफगास्तिान उपविजेताको हैसीयतमा अन्तिम चारमा उक्लेको थियो ।
यसअघि शनिबार भएको पहिलो सेमीफाईनलमा बंगलादेशलाई ५–१ ले हराँउदै नेपालले फाईनलमा स्थान पक्का गरेको थियो ।
By hamro yatra at 12:07 PM